Nanohina ny Aostraliana Ny Fampiasàna Mangingina Ireo Tahiry Nomerika Momba Ny Tena Manokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Novambra 2013 22:54 GMT
Sary avy amin'i Nathan O'Nions, tao amin'ny Flickr.
Nanaitra ny tao amin'ny Twitter tao Aostralia ny fanadihadiana mikasika ny zava-misy ankehitriny In Google We Trust (Ny Google itokisantsika). Nanadihady ny fomba fanangonana sy fampiasana ireo tahiry nomerika an'ny tena manokana ny fanadihadiana “Four Corners” nalefa mivantana tamin'ny 9 Septambra 2013 tao amin'ny fahitalavitra ABC. Niteraka fahasosorana teo amin'ireo mpijery fahitalavitra ny haben'ny fanitsakitsahana ny tsiambaratelo, ny tsy fisian'ny fiarovana antserasera, ny fampiasana ara-barotra ireo tahirin-kevitra momba ny tena manokana tahaka ireo fahazarana mividy, eny fa na ny fanaraha-maso ataon'ny polisy sy ny fitehirizana ireo takela-by nomeraon'ny fiara aza.
Nampiahiahy ireo mpisera Twitter ny fanambarana:
Mampari-koditra ahy ny fanadihadiana #4corners! Oadray.
Nampangovitra ny atidohako ny @4corners androany alina. Raha tsy nampatahotra ahy ny Westfield taloha, mampatahotra ahy izany ankehitriny. Te-hiverina hampiasa penina sy taratasy indray aho.
Toa fantatra fa efa manana fanarahan-dia “smartphone” (finday avo lenta) ho ampiasaina sahady ireo toeram-pivarotana Westfield telo. Mitovy ny an'ny RetailNext, fitaovana fanaraha-maso eny amin'ny magazay fampiasa ao Etazonia.
Mampitolagaga ity #4corners ity. Ity tantaran'ny RetailNext ity indrindra indrindra. Fanadihadiana ao amin'ny magazay. Faritra andehanan'ny mpanjifa sy fanaraha-maso ny tava ataon'ny fakantsary mpanara-maso.
Misaotra #4corners, adalan-tahotra tsara aho ankehitriny!
Anisan'ireo milaza fa tsy misy zava-baovao ao amin'ity fanadihadiana ity i Simon Johnson:
Mijery #4corners – tsy misy zava-baovao amin'ireo olana, fanaraha-maso Amerikana, fampihatra ampiasain'ny ankizy, na fanaraha-maso ataon'ny polisy amin'ny fiara. Mila fanadihadiana fanampiny amin'ny antsipirihany
Maro ihany koa ireo fanehoan-kevitra feno vazivazy:
Faly nanamarina MAIMAIM-POANA ny fiarovana ny mpijery tsirairay tao amin'ny @4corners aho androany alina. Alefaso sioka amiko fotsiny ny momba ny tahiry an'aterinetonao
#4corners my Mum just realised how untraceable she is. She has no phone, car, email address, credit card or social media account! Cat Cantina Whitlam (@TheCatCantina) September 9, 2013
#4corners Vao avy nahatsapa fa tena sarotra tsongoin-dia ny reniko. Tsy manana finday, fiara, adiresy mailaka, karatra fahana na kaonty media sosialy akory izy!
Mandrakitra fotsiny ireo habaka mamohafady notsidihako ho anisan'ny lohahevitra fakana ny diploman'ny Phd “Ny Fananahana nomerika sy ny (toerana ratsy ao amin'ny aterineto)”cyberdystopie” #honest(marina) #4corners
Nisy ihany koa ireo ahiahy politika tsy azo ihodivirana:
Mijere #4corners ao amin'ny ABC ary jereo ny antony ametrahana vondrona Wikileaks @WikiLeaksParty sy ny vondrona piraty @piratepartyau any amin'ny Antenimieran-doholona. Mitazana ankehitriny ny Big Brother…
“…Sarotra ho an'ny governemanta ny manangona izao angotahiry izao ka hijanona tsy ho voakolikoly… ary rehefa azonao izany, ho hitanao ny fomba ampiasana azy “… #4corners
Mety hampitombo indray ny fahatsapan-tenan'ny vahoaka ireo ahiahy fa mitroka mangingina ny tahiry momba antsika goavambe ny Big Brother. Na dia izany aza, tsy ny rehetra no miahiahy:
Mahafaly ahy raha ampiasain'ireo orinasa ny tahiry momba ahy raha tsy atao amin'ny hasomparana. Manamora zavatra marobe izany, tahaka ny miantsena ohatra.
Avy amin'ireo mpisera Flickr ny sary: Nathan O'Nions – Licence Creative Commmons Attribution 2.0 Generic)(Featured image by Flickr user – Nathan O'Nions – Creative Commmons Attribution 2.0 Generic)